August 2015 - Page 3 of 46 - iftineducation.com
Hablaha dheer dheer iyo Gaab Kuwee u macaan marka la joogo xiliga wasmada.
aadan21 / August 30, 2015
iftineducation.com – Warbxin kasta ee la soo saaro waxbey ka hadleysaa ee la iskama soo saaro qoraalka aan idin soo wadno waa mid muhiimad gaaor ah ii leh waxaadna ka fahmi dontaa wax badan oo aadan horay u ogeyn waayo hadii aan anahay banhada xogcusub waan jecelnahay in aan bulshda somaliyeed ka kaafino arimo badan oo aysan horay u ogeyn. Dumarka…
Video: Dhibaatooyinka haysta Muslimiinta ku nool Cupa
iftineducation.com – Muslimiinta aadka u yar ee ku nool Dalka Cupa ayaa waxaa xiligaan soo wajahay dhibaatooyin aad u farabad, sida ineeysan haysan meelo ay ku cibaadeystaan sida Masaajid. Dalka Cupa oo ku yaal Latin America, ayaa kamid ah dalalka ay aadka ugu yaryihiin Muslimiinta. Musliimnta tirada yar ee ku Nool Cupa, ayaa waxay isugu tagaan hal guri, halkaasoo ay ku…
Daacish oo dhaqaale ka samaysa Soomaalida ka tahriibta Libya, oo sidee?
iftineducation.com – Wargeyska Toddobaadlaha ee The Sunday People, kana soo baxa dalka Britain ayaa qoray in Jihadistayaasha Daacish ee ka hawlgala dalka Libya ay dadka ku khasbaan inay bixiyaan L;acago, ka hor intaysan Kooxaha wax tahriibiya saarin doonyaha ka shiraacda Xeebaha Libya, kuna sii jeeda Talyaaniga. Wargeyska waxa uu qoray inay Maleeshiyadda gacansaarka la leh Daacish ay gacanta ku hayaan ugu…
Dooni ka Baxsatay Burcad-Badeedda
iftineducation.com – Doonidan oo laga lee yahay dalka Iran iyo16 badmaaxiin oo saarnaa ay ka baxsatay burcad-badeed Soomali ah oo afduub ahaan ugu haystay xeebta Ceel-Huur ee gobolkaas. Wararka ka imanaya gobolka Mudug ayaa sheegaya in dooni laga lee yahay dalka Iran iyo 16 badmaaxiin oo saarnaa ay ka baxsatay burcad-badeed Soomali ah oo afduub ahaan ugu haystay xeebta Ceel-Huur ee…
Mo oo ku guulaystay 5000m
iftineducation.com – Mo Farah ayaa ku guulaystay bilada dahabka ee orodada 5000m ee ciyaaraha adduunka ee ka socda Beijing. Orodyahanka Mo Faarax ayaa ku guulaystay biladii shanaad ee ciyaaraha adduunka, isagoo ku guulaystay shanta kun ee meter iyo tobanka kun ee meter. Faarax ayaa ku guulaystay 5,000m iyo 10,000m ciyaarihii Olombiga ee 2012 iyo ciyaaraha adduunka ee 2013.
iftineducation.com – Hadalka naxariista iyo sheekada ham hamta (Sheekada Macaan) ayaa ah talaabada ugu horeeysa ee Weerarka Galmada , waxaana la tilmaamay xitaa xaaska mudda dheer la qabo marka sheekada macaan ee xod-xodashada maqasho in ay jiriricooto kadibna si tartiib tartiib ah aad ugu biloowdo Dhuuqmada dhanka Bishimaha faruuryaha. Dhuuqmada waxaa ugu macaan in labada raaxeysanaya midba mid kale hal bishin…
Lacag Waalan Oo laga xaday Bangiga dhexe ee soomaaliya
iftineducation.com – Xasan Sheekh iyo saaxiibadiisa siyaasadda Damu-Jadiid ayaa la xaqiijiyay inay Bankiga dhexe ee dalka kala baxeen Seddex Milyan iyo laba boqol kun oo dollar, oo ah hantida qaranka. Sida ay sheegeen ilo-wareedyo lagu kalsoon yahay, madaxweynaha iyo Saaxiibadiisa ayaa Lacagtaas ku qaaday in lagu soo iibin doono rasaas, hase yeeshee waxaa xog cusub ay xaqiijineysaa in lacagtaas lagu bixiyay…
Waqtiyadaan Danbe, Ragga Iyo Meelaha Ay jecelyihiin iney uga raaxeeyaan dumarka
aadan21 / August 29, 2015
iftineducation.com – Bishimaha:Bishamaha waa qeyb kamid ah quruxda dumarka ee soo jiidata indhaha raga maxaa yeelay raga waxaa ay mar waliba ka fiiriyaan dumarka qaabka bishamaheeda iyadoo sababta ay uga dhigaan in ay bishimaha quruxda badan a y aad ugu qeyb qaataan xiliga shumiska ama baashida adigoo aaanan ka daaleynin in aad mar walbaba shumisid bishimahaas qruxda badan isla markaana ay…
Inta Aad Qaladkaan Sameyneyso Waligaa Macaan Kulanka Ma Dareemeysid.
iftineducation.com – Waxaa jira qaladaad dhanka sariirta oo haweenka ka dhaca , ogoow gabaryaheey inta qaladaadkaan kaa dhacayaan raaxo aad ku faraxdo ma heleysid . 1- Haddii aad aamisan tahay in waxa dhan lagaa doonayo ay tahay in aad sariirta isku tuurto kana sugtid ninka baashaalka , ogoow ninka ma jecla jir aan naf laheyn waxaa muhiim ah in aad weydaarsato…
Ma Ogtahay Gogosha Raga Loo Dhigo Tan ugu Macaan Waxaa laga Helaa Dumarka Leh 4taan Calamadood.
iftineducation.com – Marka laga hadlayo dhanka soomaliyeed waa arin u baahan in lagu qoro maskax dagan iyo waliba howl badan lkn mahan mid lagu soo koobi karo hal meel oo kaliya waayo dhaqanka soomalida waa mid horay usoo jiri jiray marka aan ka hadleyo gogol waa arin dadka qaar ay u fasiran karaan wax kale lakiin sidaas modee mahan. Gogoshaan waxaan…